Kuphawulwe ngenkundla yaseMbombela | isiZulu
Kuphawulwe ngenkundla yaseMbombela
UKatongo ukhala ngesimo senkundla
Hlukanani nokugxeka abadlali - Khune
Kuyathembisa ngeBafana - Abahlaziyi
Johannesburg - Umphathi weMbombela Stadium uRoelf Kotze uthi isimo sezulu esingesihle esibonakale kule ndawo muva nje yisona sizathu esenze isimo senkundla yaseMbombela singagculisi.
Le nkundla eseNelspruit, kukhulunywa kabi ngayo kulandela ukuba amaqembu abedlala kuyona, njengoba kuqhubeka imidlalo yeAfrican Cup of Nation, eyigxekile njengoba ifakwe isihlabathi.
Ukapteni weTogo u-Emmanuel Adebayor ushiye angalazi ngoLwesithathu ebusuku ngesimo senkundla, wathi: “ ukukhuluma iqiniso nje, ukudlala enkundleni enjena kuyaliphoxa izwekazi lethu lase-Afrika, ikakhulukazi njengoba le midlalo iboniswa emazweni omhlaba.”
IKickOff.com ithintane noKotze, obe esechaza ukuthi kungani inkundla ibenjena.
"Sibe nezimvula ezinamandla ezingalinganiselwa ku-250 mm ngoDisemba28 ngakho inkundla yaba namaxhaphozi, okunzima ke ukuwaqeda ngesikhashana ezincane. Inkinga ukuthi ngeke sikwazi ukusebenzisa imithi yakhona ngoba asifuni ukubulala utshani,” usho kanje.
"Ngakho kudingeke kusetshenziswe kuqala ezinye izindlela zokuzama ukuqeda ubumanzi benkundla ngokuthi sifake isihlabathi ukuze inkundla yome. Kodwa kuthe ngemuva nje kwalokho kwalandela enye imvula nayo engu-250 mm, okusho ukuthi kunethe imvula engu-500 mm esikhathi esifushane. Konke lokhu kube yimbangela ekudalekeni kwale nkinga,” ephetha.